(1972-10-17) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၁၉၇၂ (အသက် ၄၉)
Eminem သည် သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းအား အခြေခံကာ 8mile ဆိုသော ရုပ်ရှင်ကားထဲတွင်လည်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်သီချင်း Lose Yourself မှာ တေးဂီတဆုများ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈-၁၂-၂၀၀၀ နေ့ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၏ အထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (၁၀)ဦး စာရင်းတွင် Eminem အား နံပါတ်(၁) အဖြစ်ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Eminem ၏ တတိယမြောက် အယ်လဘမ် Marshall Mathers LP (2000) သည် ထုတ်ဝေသည့် ပထမသုံးရက်၌ပင် ၂.၄ သန်း ကျော် ရောင်းချခဲ့ရသည်။ ထိုအဲလ်ဘမ်သည် အမေရိကန်ဘီလ်ဘော့ဒ် (၂၀၀)တွင် အဆင့်(၁)ဖြင့်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့၏။ "The Real Slim Shady", "Stan" တို့ကဲ့သို့သော သီချင်းများကိုလည်း လူကြိုက်များ၏။ Marshall Mathers LP တွင်ပိုမိုအောင်မြင်လာခဲ့သော်လည်း ဤအယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းစာသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် လိင်တူများ ပုတ်ခတ်သည့် ပုံစံပေါက်နေသောကြောင့် Eminemအမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများနှင့် လိင်တူအခွင့်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ ပြင်းထန်စွာ ဆန္ဒပြမူ့များနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် Eminem သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲ၌ လိင်တူဟု ဝန်ခံထားသော အဆိုတော် အယ်လ်တန် ဂျွန်(Elton John)နှင့်အတူတူ Stan သီချင်းအား သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထိုဂရမ်မီဆုပေးပွဲတွင် Eminem သည် ဂရမ်မီဆု သုံးဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် လေးခုမြောက် The Eminem Show အဲလ်ဘမ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ထိုနှစ်၌ပင် (၇.၆) သန်းရောင်းရခဲ့ပါတယ်။ ဤအဲလ်ဘမ်ထဲက တတိယမြောက်အဲလ်ဘမ်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးWithout Me, Superman, Sing for the Moment စသောသီချင်းများသည် လူကြိုက်များ ကျော်ကြားခဲ့၏။ အမေရိကန်ဘီလ်ဘော့ဒ် (၂၀၀)တွင် အဆင့်(၁) ရခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ခုနှစ်ခုမြောက် အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Recovery ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဲလ်ဘမ်ထဲက Not Afraid, Love the Way You Lie, No Love, Space Bound သီချင်းများသည် ပြည်ပတွင်သာမက ပြည်တွင်း၌လည်း နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဘီလ်ဘော့ဒ် (၂၀၀) အဆင့်(၁) ထပ်မံရခဲ့၏။
↑ " Archived2February 2016 at the Wayback Machine.", Billboard
↑ Roberts၊ David (2006)။ British Hit Singles & Albums (19th ed.)။ London: Guinness World Records Limited။ p. 137။ ISBN 1-904994-10-5။
↑ Encarta online encyclopedia မှ။ 28 August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 August 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမ်မီနမ်&oldid=689277" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။